मलाई बुवाको अभाव महशुस हुँदैन,अस्ती बुवाको फोन आएको थियो स्वर सुन्नेबित्तिकै काटिदिए ।(भिडियो सहित)
काठमाडौ : नायीका पुजा शर्माले क`हिल्यै आफुलाई पि`ताको अभाव नहुने बताएकी छन् । उनले जुन बेला आफुलाई पिताको सहयोग र सहारा चाहिएको थियो त्यो बेला नपाए`को साथ अब नचा`हिने बताएकी छन् ।
वुवाले आमा`लाई तिरस्का|र गरेका कारण आ|मासंग मात्रै बस्दै आएकी पुजाको संघर्षको जिवन छ । पुजालाई आमा एक्लैले हुर्काएकी हुन् । छोरी भएका का`रण पुजा र उनको आमालाई परि`वारले तिरस्कार गरेको उनले यस अघिका अन्तरवा`र्तामा बताएकी थिइन् ।
उनले भनिन्, मलाई बुवाको अभा`व महशुष हुँदैन, अस्ती फोन आएको थियो । मैले आवाज सुन्ने वित्तिकै फोन राखिदिए । मलाई कुरा पनि गर्न मन लाग्दैन । मला`ई अब चाहि`एको छैन । मेरो हात`खु्टा सहि सलामत छन् । आफै केही गरेर खान सक्छु । त्यसैले मलाई बुवाको अभाव अहिले छैन । उनले आफु`लाई किन फोन गर्नु ?
जति`वेला मलाई र मेरो आमा`लाई परिवारको साथ चाहि`एको थियो त्यती बेला पाइएन । उनीहरु अब मलाई चाहिदैन ।
उनले आफु`लाई जे काम गर्न पनि हि|म्मत लाग्ने बताए`की छन् । त्यो साहस आफु`लाई आमाले नै दिएको बताएकी छन् । आमानै आफ्नो जिवन भए`काले आफु|लाई आमाले मात्र हेण्डल गर्न सक्ने बता`एकी छन् । आमासंग टाढा हुन नपरोस भनेर नै आफुले वि|वाहका बारेमा अहिले सोच्न नसके`को बताएकी छन् ।
उनले सके|सम्म धेरै समय आ`मासंगै बिताउन चाहे`कै कारण विवाह पनि ढिलो गर्ने सोच बना`एको बताएकी छन् । कता कता डर लाग्छ विवाह गरेर जाने घर कस्तो पर्ने हो ? आमा`लाई हेर्न पाउँछु की पाउँदिन यो सबै कुरा सोचेर पनि विवा`हको बारेमा सोच्न सक्दिन ।
२०७८ जेष्ठ ३१, सोमबार १०:५० गते0Minutes 502 Views